Ciidamada ammaanka maamulka Somaliland oo garoonka diyaaradaha Hargeysa ku xiray wariye Cooldoon - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaCiidamada ammaanka maamulka Somaliland oo garoonka diyaaradaha Hargeysa ku xiray wariye Cooldoon
February 15, 2017 Puntland Mirror Somalia, Somaliland 0
Wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon. [Sawirka: Archive]
Hargeysa-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka maamulka Somaliland ayaa xiray wariye Cabdimaalik Muuse Cooldoon, sida ay sheegayaan wararku.
Coldoon oo kasoo jeeda maamulka Somaliland ee waqooyiga Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay joogay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Maanta oo Arbaco ah ayaa wariyuhu ku noqday magaalada Hargeysa , waxaana isla markiiba garoonka diyaaradaha ka qabsaday ciidamada maamulka Somaliland.
Ma jirto war sax oo ku saabsan sababta loo xiray Cooldoon, balse wararka ayaa sheegaya in loo xiray kadib markii uu la kulmay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Cabdimaalik Cooldoon ayaa ah wariye inta badan ka shaqeeya kaalmeynta dadka masaakiinta ah.
June 2, 2018 Puntland oo ku eedaysay Somaliland weerarkii lagu qaaday saldhiga ciidamada ee deegaanka Bali-Khadar